Muuri News Network » Maamulka Koonfur galbeed & Beesha Caalamka oo ka dhex tafatay..
Maamulka Koonfur galbeed & Beesha Caalamka oo ka dhex tafatay..
Xasan Cabdi Axmed oo maamulka ugu magacaaban Wasiirka Warfaafinta, ayaa sheegay in Al-shabaab ay kusii xoogeysanayaan deegaanada maamulka, waxa uuna arrintaasi dhaliisheeda dusha u saaray wakiilada Beesha Caalamka ka jooga Somalia.
Xasan Cabdi waxa uu sheegay in wakiilada Beesha Caalamka imaanshiyahooda magaalada Baydhabo ay ballanqaadyo kala duwan u sameeyan maamulka hayeeshee taasi ay kusoo biyo shubatay waxkama jiraan.
Wuxuu sheegay in Ciidamada maamulka aysan heysan agabkii loogu tallo galay, sidaa darteedna dhaqaalihii lagu qalabeyn lahaa aysan wali bixin Beesha Caalamka, bacdamaa ay iyagu ballanqaadkaasi dhowr jeer sameeyen.
Sidoo kale, Xasan Cabdi waxa uu cadeeyay in Koonfur galbeed aysan dib usoo hadal qaadi doonin dhaqaalaha ay ballanqaadeen Beesha Caalamka, waxa uuna wacad ku maray in maleeshiyada Al-shabaab ay isaga difaaci doonaan inta ay gaarsiisan tahay awoodooda.
Haddalka wasiirka ayaa imaanaya xili maleeshiyaadka Al-shabaab ay Gudaha u soo galeen Demooyin badan u ka taliyo maamulka Koonfur galbeed, xili maamulka uu ka cabanaayo dhaqaale xumi.